Aqoonyahanada | November 2019
Ugu Weyn Ee Aqoonyahanada
Cilmi-baadhayaashu waxay abuureen isku-dhafka dadka iyo doofaarka
American, Spanish iyo Japanese scientists waxay awoodeen in ay keenaan isku-dhafka dadka iyo doofaarka iyagoo soo bandhigaya mid ka mid ah saddexda nooc ee unugyada asaasiga ah ee bini-aadanka loo yaqaan 'embryos beel'. Taas ka dib, embriyaha waxaa loo wareejiyay dhuuq si kor loogu sii qaado, taas oo ah mid aad u guuleysatay. Qalabka bani'aadamka, oo ah ciriiri-socodkeedi, ayaa la kormeeray iyadoo la isticmaalayo borotiinka fluorescent, oo loogu talagalay soo-saarka unugyada asaasiga ah ee bini-aadanimada.
Tan shanaad ee cuntada adduunka ayaa la tuuraa.
Daraasad dhowaan soo baxday ayaa soo jeedinaysa in ku dhawaad ​​20% dhammaan cuntooyinka ay heli karaan macaamiisha lumay sababtoo ah miro ama qashin. Sida laga soo xigtay daraasadda, adduunku wuxuu cunaa 10% cunto ka badan intii loo baahnaa, halka qiyaastii 9% la tuuray ama la jabiyay. Cilmi-baarayaasha Edinburgh ayaa sheegaya in dadaallada lagu yareeynayo balaayiin tiradood oo khasaaro ah ay kor u qaadi karto ammaanka cuntada caalamiga ah iyo in la hubiyo in guud ahaan la heli karo cunto ammaan ah oo la awoodi karo, nafaqo leh oo nafaqo leh.
Aragtida guud ee beeraha ayaa ah mid aan sax ahayn oo marin-habaabinaysa.
"Waxsoosaarka cuntada waa inuu labanlaabaa 2050 si uu u quudiyo dadka koraya ee meeraha." Cilmi-baaristaan ​​ayaa marar badan soo noqnoqoneysa sanadihii ugu dambeeyay oo ay heshay aqoonsi ballaadhan oo ka dhexmuuqda saynisyahanno, siyaasiyiin iyo beeraley, laakiin hadda cilmi-baarayaashu waxay caqabad ku tahay caddayntaas iyo soo jeedinta aragti cusub mustaqbalka beeraha.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Aqoonyahanada 2019